घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू आइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरू फ्रैंक केसी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो फ्रान्क केसी बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी (जोएल), कारहरू, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँदछ।
यो एक संक्षिप्त जीवन कहानी हो इभेरियन जो मिडफील्डमा अत्यन्त राम्रो छ। हाम्रो उनको जीवनी शुरू देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईंलाई बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवन र क्यारियरको प्रगतिको चित्रण सार हो।
फ्रैंक Kessie जीवन कहानी।
हो, मिडफिल्डमा खेल बन्द गर्न र विपक्षमा दबाब दिने उसको क्षमताको बारे सबैलाई थाहा छ। यद्यपि केवल थोरै व्यक्तिले फ्रान्क केसीको जीवनी पढेका छन जुन धेरै आकर्षक छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फ्रान्क केसी बाल्यकाल कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम फ्रन्की हो। फ्रान्क Yannick Kessié डिसेम्बर १ 19 1996 of को १ day औं दिन दक्षिण मध्य आइवरी कोस्टको Ouragahio शहर मा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो बुबाआमा, श्री र श्रीमती Kessie को जन्म भएको थियो।
फ्रान्क केसी परिवार मूल:
खेलाडी कालो जातीयताको इभोरियन राष्ट्रिय हो। वास्तवमा भन्ने हो भने, उनको पारिवारिक जरा पश्चिम अफ्रिकी देशमा गहिरो स्थापित छ, जुन पौराणिक कथाको घर छ Didier Drogba। साथै, के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि उ उस्तै जन्मस्थान साझेदारी गर्दछ सर्ज एरियर? अब तपाईं गर्नुहुन्छ!
एक नक्शा फ्रान्क Kessie को जन्म शहर Ouragahio हाइलाइट।
फ्रान्क केसी बढ्दो-अप वर्ष:
के तपाईंलाई थाहा छ केसीले आफ्नो बाल्यावस्थाको अधिकांश भाग आफ्नो जन्म शहर ओरागाहियोमा बिताए? चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनीसँग पेशेवर फुटबलर बन्ने बाल्यकालको सपना थिए र सडक र मैदानमा उसको खुट्टामा बलको साथ समय बिताए।
फ्रान्क Kessie परिवार पृष्ठभूमि:
खेलाडी एक मध्यम-वर्ग परिवारमा जन्म भएको थियो। यस प्रकार उसले पछ्याउन चाहेको कुनै पनि प्रयासमा सफल हुने उचित अवसर थियो। भाग्यवस, उनले फुटबल छनौट गरे र खेलकुद पनि उनलाई छनौट गरे।
फ्रान्क केसीको लागि कसरी क्यारियर फुटबल शुरू भयो:
इन्टरनेटमा गलत सूचना बनाउने राउन्डको विपरीत, फ्रान्की फुटबलमा पछिल्लो स्टार्टर थिएन। वास्तवमा भन्ने हो भने, उनले जाडी एफसी लगायत स्थानीय छनौटहरूको माटोको पिचहरूमा खेल्दै वर्षौं बिताए।
ऊसँग घाँसमा खेल्ने लक्जरी थिएन।
यद्यपि क्यारियर उन्नतिका लागि अवसरहरू थिएनन्। तसर्थ, उनी अबिजान सरे जहाँ उनी स्टेला क्लब अड्जामा सामेल भए। जुन त्यस समयमा सब भन्दा बलियो इभोरियन टोली मध्ये एक थियो।
क्यारियर फुटबल मा फ्रान्क Kessie प्रारम्भिक वर्ष:
थोरै व्यक्तिलाई मात्र थाहा छ कि फ्रान्कीले आफ्नो क्यारियर स्टेलाबाट केन्द्रीय डिफेन्डरको रूपमा शुरू गरे। वास्तवमा, अटलान्टाबाट स्काउट्सले उनलाई ध्यान दियो जब तिनीहरू डिफेन्डरको खोजीमा थिए, मिडफिल्डर होइन। अटलान्टा आइपुग्दा, केसीलाई क्लबको प्राइमवेरा टीममा खटाइयो जहाँ उसले प्रभावित गर्यो। लगभग समान अवधिमा, फ्रान्कीले पनि आफ्नो देशको टीमको लागि ठूलो काम गरिरहेको थियो।
हेर्नुहोस् कि उसले १ 17 मा हिर्काउनु अघि कसले ट्राफी उठाइरहेको थियो।
फ्रांक Kessie जीवनी - प्रख्यात कहानी को लागी:
यद्यपि युवा प्रतिभालाई नेराज्जुरीको पहिलो टीममा बोलाइएको थियो, तर उनले आफ्नो प्रोफेशनल पदार्पण गर्ने अवसर कहिल्यै पाएनन्। भाग्यवस, क्लबले उनलाई सेरी-बी साइड सेसेनामा edण दिएको थियो, जहाँ उनी टिमको आधारशिला मात्र बनेन तर मिडफिल्डरको रूपमा खेल्ने नयाँ स्थानमा पनि उनी अनुकूल भए।
मिडफिल्डरको भूमिकामा छाँटकाँट गर्नु पहिले सजिलो थिएन।
फ्रान्क केसी जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
केसनामा आफ्नो शानदार स्पेल पूरा गरेपछि, फ्रान्की आफ्नो अभिभावक क्लबमा फर्किए र एक योग्य पेशेवर पदार्पण गरे। २०१ 2017 मा एसी मिलानमा सर्नु अघि उसले क्लबको साथ आफैलाई स्थापित गर्‍यो।
ब्ल्याक एण्ड रेडमा उनको आगमन पछि, केसीले क्लबले उनलाई लिनको लागि तिरेको प्रत्येक पैसाको मूल्यवान साबित भएको छ। बोनसको रूपमा, उसले कार्य गर्दछ एसी मिलान मा एक नेता जस्तै जहाँ उनी ड्रेसिंग रूम र आधिकारिक पेनाल्टी किकरका अध्यक्ष हुन्। जे भए पनि पछिल्ला क्यारियरमा उसको लागि चीजहरू बाहिर निस्के, बाँकी, उनीहरूले भने जस्तो इतिहास हुन्छ।
फ्रान्क Kessie पत्नी को हो?
फ्रेन्की प्रेम र डेटि of को मामला मा कुनै अपरिचित छ। वास्तवमा, उहाँसँग गाँठो बाँध्नु अघि सुन्दर केटीहरु संग धेरै साहसिक कार्य गरेको छ। उनको श्रीमतीको नाम जोएल हो। हामीले भेला गर्यौं कि उनी पनि योपगोन शहरमा हुर्केकी छिन। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, सोकर स्टारले उनीहरूको विवाहलाई गोप्य पारेको छ। केसेलीको जोएलसँगको मिलन एक बच्चाको साथ आशिष छ।
फ्रान्क Kessie पत्नी जोएल र बच्चा।
फ्रान्क केसी पारिवारिक जीवन:
प्रशंसकहरु र प्रशंसकहरु को एक गुच्छा फ्रन्की उनी प्रसिद्ध भए पछि मात्र थाहा थियो। यद्यपि त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जुन उनी जन्मे देखि उसलाई चिन्थे। तिनीहरू परिवार हुन्। हामी तपाइँलाई फ्रान्क केसीका आमाबुबाको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। हामी यहाँ उसका भाइबहिनी र आफन्तहरूको विवरण पनि प्रदान गर्नेछौं।
फ्रान्क केसी अभिभावकको बारेमा:
फ्रान्कीका बुबा फुटबल खेल्ने बानी बसाल्थे ऊ सिपाही हुनु भन्दा पहिले। दुर्भाग्यवस, उनको एक रोगले मृत्यु भयो जब केसी केवल ११ वर्षको थिए। त्यसकारण, फ्रान्की सैन्य स्टाइल सलाम प्रदर्शन गर्दछ जब उहाँ आफ्नो लेट बुवाको स्मृति सम्मान गर्न स्कोर।
हामी देख्दछौं कि उसको बुवालाई एक दशक भन्दा बढि अभिवादन छ।
अर्कोतर्फ, उनको आमाको बारेमा जानकारी छैन। जे होस्, हामी विश्वास गर्छौं कि उनी एक सहायक व्यक्ति थिइन्। वास्तवमा, तपाईंले केसीलाई लामो समयसम्म हेरिरहनु पर्दैन किनकि उसले एक आमाको सुरक्षात्मक हेरचाहको आनन्द उठायो।
फ्रान्क केसी भाई बहन र आफन्तहरूका बारे:
आफ्ना आमा बुबाबाट टाढा फ्रान्कीले कुनै भाइ वा बहिनी भएको कुरा उल्लेख गरेको छैन। न त Kessie ले आफ्नो प्रशंसकहरु को आफ्नो विस्तारित पारिवारिक जीवन मा झलक दिएका छन्, विशेष गरी जब यो उनको मामा र बुवा हजुरबा हजुरआमा सम्बन्धित छ। साथै, हामी उनको काका, काकी र काकाको बारेमा जान्न उत्सुक छौं। थप रूपमा, उनी आफ्ना भतिजा र भान्जीहरू (यदि उनका दाजुभाइ छन् भने) बारे स्वयम्सेवा गर्न पनि प्रकारको हुनेछ।
फ्रान्क केसी निजी जीवन:
त्यहाँ दुई शब्दहरू छन् जुन फ्रान्कीको व्यक्तित्व वर्णन गर्न सक्छ। चट्टानी र कोमल। चट्टानीले, हामी यसको मतलब हो उहाँ एक मुख्य पेशेवर हुनुहुन्छ जब यसको माग गरिन्छ। यो उनले किन शान्त हुन सकेन किनभने जब उनी थियो मिलान डर्बी पराजयको समयमा अन्तर प्रशंसकहरूले जातीय दुरुपयोग गरे। उहाँ कोमल, भावनात्मक बौद्धिक र रमाईलो पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा, यो मुक्त मौसमको फुटबल तारा सबै मौसमको मानिस को रूपमा वर्णन गर्न सुरक्षित छ।
हामी शर्त लगाउँछौं कि यो छवि तपाईंको स्वतन्त्र उत्साहको परिभाषा संग मेल खान्छ।
जे होस्, हामीले यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि Kessie आफ्नो निजी र निजी जीवनको रक्षा गर्छ। बाहिर समय बिताउने र साथीहरू / सहकर्मीहरूसँग पर्खनुको लागि उसको प्रेमले तपाईंलाई पूर्ण स्वतन्त्र-उत्साहित व्यक्तिको लागि अलमल्लमा पार्नुहुन्न।
फ्रान्क केसी जीवनशैली:
यो याद गर्नु अचम्मको कुरा हो कि फ्रान्की एक महान युवा प्रापक हो। यो hype होइन, तर तथ्य हो। विशेष गरी जब तपाईं यो बुझ्नुहुन्छ कि उसको वार्षिक तलब २.२ मी। यो भनिन्छ कि धनी फुटबल सितारों को साबित छैन कि गंदा धनी छन्। यो भनाइ निश्चित रूपमा Kessie को लागी पकड हो किनभने ऊ आफ्नो विदेशी कार flaunting मा ठूलो छैन। न त उनले आफू बस्ने घर / अपार्टमेन्टको विलासी प्रकृति प्रकट गरेका छन्।
कमसेकम ऊ हाम्रो औडी हेर्नको लागि पर्याप्त विनम्र थियो।
फ्रान्क केसी बारे तथ्यहरू:
मिडफिल्डरको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यो लेख समेट्न, यहाँ उनको बारे मा कम ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
प्रति वर्ष:: € 2,200,000।
प्रति महिना: € 183,333
प्रति हप्ता: € 42,242।
प्रति दिन: € 6,034।
प्रति घण्टा: € 251
तपाईंले फ्रान्क केसीलाई हेर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
विगतमा, हामी सजीलै 78 82/2021२ रेटिंग निष्पक्ष रूपमा लेख्दछौं। जहाँसम्म, हामी मद्दत गर्न सक्दैनौं तर स्वीकार गर्न सक्दैनौं कि केसीको लागि त्यस्तो रेटिंग अनुचित छ। भावी पुस्तालाई हामी कसरी फुटबल उत्साहीलाई सूचित गर्ने थियौं कि केसीजस्तो एक प्रतिभावानले २०२१ मा उनको नाममा त्यस्तो रेटिंग गरेका थिए? हामी आशा गर्दछौं कि उसको रेटिंगको योग्य उदार समीक्षा अपेक्षित भन्दा चाँडो आउनेछ।
अब तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि किन हामीले भने कि उहाँ अझ योग्य हुनुहुन्छ।
तथ्य # - - फ्रान्क केसी धर्म:
अफ्रिकी फुटबलर एक क्रिश्चियन हो। यद्यपि इस्लामिक चाडपर्वका बेला उहाँसँग मुसलमानहरूसँग मनाउने कुनै मुद्दा छैन। वास्तवमा, Kessie एक पटक टीम साथी संग पोज हाकान Çalhanoğlu ईदमुबारकको अवसरमा आफ्ना मुस्लिम प्रशंसकहरूलाई बधाई दिन।
हेर्नुहोस् फ्रान्की र उनका मुस्लिम सहकर्मीहरू सँगै रमजानको अन्त्य मनाउँदै।
तथ्य #4- नम्बर ११ जर्सीको महत्व:
११ नम्बर Kessie को लागि महत्वपूर्ण छ। सुरुमा, उहाँ ११ तारिखमा जन्मनुभएको थियो, उनका बुबा ११ तारिखमा मरे। साथै, यो एक निश्चित महिनाको ११ औं दिनमा थियो कि केसी एटलान्टामा हस्ताक्षर गरेपछि युरोप आइपुगे।
पूर्ण नामहरू: फ्रान्क Yannick Kessié।
जन्म मिति: डिसेम्बर १ 19 1996 XNUMX को १th औं दिन।
जन्मस्थान: दक्षिण मध्य आइवरी कोस्टमा Ouragahio को शहर।
सेमी मा उचाई: 183 सेमी।
खेल्ने स्थिति: मिडफिल्डर
प्रेमिका / श्रीमती हुनु: जोएल
बच्चाहरु: एक बच्चा
कुल मूल्य: € 5m
फ्रान्क केसीको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यस जानकारीपूर्ण टुक्रा पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि पश्चिम अफ्रिका देखि युरोपको लागि फ्रान्कीको उत्साहजनक यात्राले तपाईलाई विश्वस्त गरायो कि कोहीले पनि बाल्यकालको सपना प्राप्त गर्न सक्दछ।
फ्रान्क केसी जस्तै, जो दिन को समयमा एसी मिलानको लागि खेल्ने कल्पना गर्थ्यो जर्ज वेह। उनले सपना पूरा गरे कि एसी लगाएर मिलान शर्ट दोस्रो छाला जस्तो लाग्छ.
फ्रान्क केसीका आमाबुवाको उत्कृष्ट पालनपोषणको लागि अब हामी उनलाई प्रशंसा गर्छौं। Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाइँ केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्।